Izindaba - Imakethe yeMethacrylic acid iyonke izohlala isebenza kakhulu
Imakethe yeMethacrylic acid iyonke izohlala isebenza phezulu
Muva nje, imakethe ye-methacrylic acid yasekhaya yonke ikhombise ukuthambekela kokuphokophela phezulu, ukugxila kokuhweba okuphelele emakethe kuqhubekile nokukhuphuka, futhi ezingeni lokuphakelwa kwendawo kwaqhubeka nokuqina, inani lentengo elilodwa lokuthengiselana lamanzi amaningi lenyuke ngo-1,500 i-yuan / ithani ngokuqhathaniswa nentengo yokuvala kaSepthemba, isunduzelwe ku-14000-14500 yuan / ton. Imakethe yonke kunzima ukuthola ukutholakala okuphansi, isikhungo samandla adonsela phansi siyaqhubeka nokukhuphuka. Siyini isizathu sentengo yamuva yemakethe yasekhaya ye-methacrylic acid egijima kakhulu?
Okokuqala, izinga lokuphakelwa lakamuva le-methacrylic acid liqinile, amanani emakethe aqala ukusebenza.
Kusukela ngo-Okthoba, ukukhiqizwa kwe-methyl methacrylate kubakhiqizi abashintshekayo bekuyikho okuyinhloko, ngakho-ke ukukhishwa kwe-methacrylate kuye kwehla ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, abanye abakhiqizi be-methacrylic acid basekhaya abanjengoLiaoning Hefa basemkhankasweni wokulungiswa kokupaka futhi kulindeleke ukuthi kuqale ukusebenza okujwayelekile ngoNovemba, nakho okubhebhethekisa ukushoda okuphelele kokutholakala kwe-methacrylic acid yasekhaya.
Ukungeniswa kwango-Okthoba kwemithombo ye-methacrylic acid kukhombise ukuthambekela kokwehla. Ngenxa yokuvalwa nokulungiswa kabusha kwenyakatho-mpumalanga ye-Asia i-methacrylic acid plant ngo-Okthoba, uhlangothi lokuphakelwa luyaqhubeka luqinile. Ngakho-ke, ukungeniswa kwe-methacrylic acid ngo-Okthoba kuyindlala, futhi ukunikezwa kwemakethe kwama-oda uqobo kuyaqhubeka nokuqina.
Okwesibili, ngaphansi kwesizinda sesikhathi sokuthengisa esiphakeme, isimo esingezansi sokufunwa kwemethacrylic acid iyaqhubeka nokuthuthuka.
U-Okthoba uqondana nenkathi yokuthengisa yendabuko esezansi kwe-methacrylic acid yasekhaya, isimo se-oda jikelele se-terminal esezansi sikhombisa ukuthambekela okuhle. Thatha i-hydroxyethyl methacrylate esezansi njengesibonelo. Njengamanje, intengo enkulu yokunikezwa emakethe yasekhaya inyuke yaya ku-17,000-17,500 yuan / ton, kanti umkhiqizo omkhulu we-hydroxypropyl methacrylate esezansi usukhuphuke waya kuma-yuan / ton angama-21,000-21,500 emakethe ejwayelekile. Okunye ukumbozwa, izithasiselo nezinye izinto ezisezingeni eliphansi le-terminal yomkhathi nakho kuveza imodi yokuthuthuka engcono.
Ethintwe ukusunduza okuhle nokuvuka kwesidingo sangempela se-terminal engezansi, isidingo sangempela sakamuva semethacrylic acid yokuthenga umoya siyaqhubeka nokukhula kahle.
Okwesithathu, umkhiqizo wakamuva wokuhlanganiswa kwemakethe ye-methyl methacrylate ukhombise ukwenyuka okuphezulu, okukhuthaza ukukhuphuka kwentengo yemakethe yasekhaya ye-methacrylate.
Kusukela ekuqaleni kuka-Okthoba, intengo yemakethe yasekhaya ye-methyl methacrylate, umkhiqizo ohlobene we-methacrylate yasekhaya, iqhutshwe ngamandla, futhi umoya wokuhleleka jikelele uyaqhubeka nokuba muhle, inani lentengo elijwayelekile likhuphuke laya ku-13,000-13,500 yuan / ton , izinga lokuphakelwa kwendawo likhombisa ukuthambekela okuqinile, abathengisi baqaphile ukuthi bathengise ikakhulukazi, isikhungo sokuthengiselana sonke semakethe sikhuphuka. Ngenxa yokwenyuka okuphezulu kwentengo yemakethe ye-methyl methacrylate, ukukhushulwa okuhambisanayo kwentengo yasemakethe ye-methyl methacrylate ukugcina ukusebenza okuphezulu.
Ukufingqa, ngenxa yomthwalo ophansi wokufakwa kwe-methacrylic acid yasekhaya nokuhlinzekwa kwendawo eminyene muva nje, ukufunwa kwama-oda uqobo kumatheminali asezansi komfula kuyaqhubeka nokuba ngcono esikhathini sonyaka wendabuko, futhi intengo yemakethe yomkhiqizo ohlobene i-methyl methacrylate inyuka kakhulu izinga. Ithintwe yizici ezingenhla ezingenhla, imakethe yasemethacrylic acid yakamuva nje isazohlala ithambekele ekusebenzeni okuphezulu.
Isikhathi Iposi: Jan-21-2021